Fayrka u soo baxaanka ee daahida ee u soo guud
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Architectural Mesh > Taah>Chainmail
Magaca: Robert Zhao
Cinwaanka: East industrial Zone, Anping, Hebei, China
DULUNKU HILA GA
Dadka chainmailIskuulka ku yaala daad bir ah ee aqooneed iyo caafimaad. Xisaabkiisu waxay la mid yihiin daahirka geed. Kun oo badan buuxo ah waxay isku wadajiyaan si ay sameeyaan daahir weyn. Daahka daadka ee daboolka ah waxaa laga isticmaalaa sida kala duduwan, la xidhiidha, la xisaab, la xisaabin, waa la'aan la'aan. Sidoo uu ku yaal xoog badan uu uu uu uu uu dacwad weyn. Dadka ah waxaa loo aqoonsaday daahirka uu si badan oo badan oo dhan, Hanayooyinkeeda wanaagsan ee sida xoog uu uu uu uu u yahay waqti dheer oo daad caadiga ah, Sidoo kale waxaa ku yaal fiican wanaagsan oo la xiriirta masruufka la yar ah, kaasoo la isticmaali karaa sidii raaxad goobta iyo dibadda ah. Derbigii daaqada qeybta, daryeelka daaqada, qorshiisa laamka ee ah.
IMagaca dhaqaalaha: daahil.
IWarka: 304/316 sal la'aanta, aluminium, salka galvaniga ama karbon.
IMidiba: lacagta, dahabka, kopad ama midibada caadiga. Sidoo kale midibaha kale waxaad ka heleysaa.
IWadiilka: 0,5 mm - 2 mm.
IDiyaameysan: 3 mm - 22 mm.
IMeesha shilka ee goobta ah:
IMiisaanka: 5 kg/m2 - 7 kg/m2
IInta iyo saadka.
CMC-02 qiimeynta daadka ee sharciga da'da.
Dadka lacagta lacagta CMC-03.
IXoog uu sare: Biyaheeda wuxuu bixiyaa diyaarinta iyo hantiyaasha guriga.
IShaqooyinka sad ah: dhinaca la xiriira, la’aan la’aanta, haddii la isticmaalo.
IXumaanta uu xumeeya: Xataa xataa cilmiga ah, daahidu wuxuu wanaagsan doonaa.
IKa hortagta dabka ee daahilka ee daahilka ee daahilka ah waa ka sarreeyaa.
IBiyaaridda iyo iftiinka:Dadka fiican ee ku haystaa oo u kordhisa iftiinta.
IMasruufka hooseeya: Dadka daadka sirinta ah waxaa lagu maysaa biyo saabbood ah.
IWax dheer oo jooga: Kaalmooyinka ee raaxadda bireeysa la'aan, daahilka xirfadeed wuxuu bixiyaa wakhti dheer.
IFiican wanaagsan ee la xiriirta:
Dheedka CMC-04 u leeyihiin dhibaatooyinka ee la’aanta ah.
CMC-05 xirfadda dabii
Dadka chainmail waxaa looga isticmaalaa guriga iyo badbaadada. Waxaa isticmaali kartaa:
IQofka goobta iyo dibadda.
IQeybin ama daqsashada.
Dheedka CMC-06 waxaa looga codsadaa qofka qeybinta.
Codsiga:Sidoo kale aynu arki kartaa daahilka sireynta waxaa ku yaal shaqaalaha badan, sidaas daraaddeed waxaa looga isticmaalaa badan oo kala duwan.
IDaahka geedka lagu sameeyo boqolka la shaqadaa, haddana baaxayga booska loo sameeyo kaalmooyinka iyo xaaladaha qoryaha ah ee aad u baahantahay.
IDadka u sameeyo goobta biyaha ee biyaha ama filimiga booska iyo dibaanta ku jiro booyinka kartoyinka ama xaaladaha carruurta. ..
Sida caadiga ah, daadka sirinta ah waxaa lagu sameeyaa usha daahida daad ah ee daad ah ama raadka aluminium. Wadooyinka aluminiumu wuxuu ka heleysaa raacada U iyo H. Labadaba waa nidaamka daahirka ee daahilka ah, kaasoo ah xafiis wanaagsan ee deraha daaqada ah iyo daaqada daryeelka. Oo ulka daahka daah aan da'aanta ahu wuxuu fududaya in si fudud u dhaqdhaqaaqo, oo dhankeedu waaweyn, si gaar ah u habboon daad dheer oo daran. Waxada alumiiniumka ee daheedka ee daahilka lacagta ee daahilka ah oo isticmaala qaarkood si uu u qabsan xagga deriga. Oo ulka daahka daahda la'aanta u sameeyo daahda la xidhiidha daahda ah, iyo daahda la xidhiidhaa xidhiidha xad yar ah, Markaasna u tuuray usha daahilka.
Shaqooyinka ee daahida CMC-08.
Ka dambe :Dadka iskuulka
Tag : chainmail curtain, ring mesh curtain, architectural ring mesh,
Sidee uu uu isticmaalaa daahirka ee gaarga?
Daadka ee lacagta ahWaa nooc cusub ee kharashka ah, darteed ee la xiriirteeda ee gaar ah iyo aqoonta ee uu uu uu uu u yahay, waxay sidoo kale si toos ah ee si toos ah ee xirfadda biirka ah. Midiba daa...
Dagaalaha ahWaan ku xiriir birta isku xiriirka. Lacagta isbarbarid ee la xiriirtay, la xiriirta waxaa la xiriira shaqada la xiriira. Dadkaasu waxay u fudud ka dhigtaa daahida.Dadka chainmailWaxaa loog...
Doorashada midbarka daahida chainmail
Dhab ahaan sababta midibkaDadka xirfadaWaa in midibka derbiga, taas, inuu doorto midibka isku midib, laakiin waxaa la beddelay oo keliya nuurnimada iyo daahir. Tusaale ahaan derbiyada la xiriirta la x...
Dadka ee dabka ah ah
Daadka ee lacagta ahXitaaS biyaha birta ahWaxaa laga sameysaa dabka yar, kuwaas oo la xidhiidha isku xidhiidha «S». Waa caawimaad oo cusub ah. Daadkeedii ka sameyn yahay ka sameyn yar karbon, saleys l...